Amụma nzuzo maka healthcare-disclose.com - ibe 2022
Amụma nzuzo maka healthcare-disclose.com
Na healthcare-disclose.com, inweta site na healthcare-disclose.com, Otu n'ime ihe kacha anyị mkpa bụ nzuzo nke ndị ọbịa anyị. Akwụkwọ amụma nzuzo a nwere ụdị ozi anakọtara yana dekọọ healthcare-disclose.com na otu anyị si eji ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ chọọ ozi ndị ọzọ gbasara amụma nzuzo anyị, egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Amụma nzuzo a na-emetụta naanị mmemme anyị n'ịntanetị yana ọ dabara maka ndị ọbịa na webụsaịtị anyị gbasara ozi ha kesara na/ma ọ bụ nakọta na ya. healthcare-disclose.com.
Site na iji webụsaịtị anyị, ị si ebe a kwenye na amụma nzuzo anyị wee kwenye na usoro ya.
A ga-eme ka ozi nkeonwe nke a gwara gị ka o nye, yana ihe mere a ga-eji gwa gị ka o nye ya, ebe anyị na-arịọ gị ka ịnye ozi nkeonwe gị.
Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị ozugbo, anyị nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara gị dị ka aha gị, adreesị ozi-e, akara ekwentị gị, ọdịnaya nke ozi na/ma ọ bụ mgbakwunye ị nwere ike izipu anyị, yana ozi ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịhọrọ ịnye.
Mgbe ị debanyere aha maka Akaụntụ, anyị nwere ike ịrịọ maka ozi kọntaktị gị, gụnyere ihe ndị dị ka aha, aha ụlọ ọrụ, adreesị, adreesị ozi-e, na akara ekwentị.
Anyị na-eji ozi anyị na-anakọta n'ụzọ dị iche iche, gụnyere iji:
Nye, rụọ ọrụ ma dokwaa webụsaịtị anyị
Melite, hazie ma gbasaa webụsaịtị anyị
Ghọta wee nyochaa otu esi eji webụsaịtị anyị
Zụlite ngwaahịa, ọrụ, njirimara na arụmọrụ ọhụrụ
Kpọtụrụ gị ozugbo ma ọ bụ site na otu n'ime ndị mmekọ anyị, gụnyere maka ọrụ ndị ahịa, iji nye gị mmelite na ozi ndị ọzọ metụtara webụsaịtị, yana maka ịzụ ahịa na ebumnuche nkwado.
Zitere gị ozi-e
Chọta wee gbochie wayo
healthcare-disclose.com na-agbaso usoro ọkọlọtọ nke iji faịlụ log. Faịlụ ndị a na-abanye ndị ọbịa mgbe ha gara na webụsaịtị. Companieslọ ọrụ nnabata niile na-eme nke a yana akụkụ nke nyocha ọrụ nnabata. Ozi nke faịlụ ndekọ anakọtara gụnyere adreesị protocol ịntanetị (IP), ụdị ihe nchọgharị, Onye na-enye ọrụ ịntanetị (ISP), akara ụbọchị na oge, ibe na-ezo aka/wepụ, yana ikekwe ọnụọgụ ọpịpị. Ejikọtaghị ihe ndị a na ozi ọ bụla nwere ike ịmata onwe ya. Ebumnuche nke ozi a bụ maka nyocha usoro, ijikwa saịtị ahụ, nyochaa mmegharị ndị ọrụ na webụsaịtị, na ịnakọta ozi igwe mmadụ.
Kuki na mgbama webụ
Dị ka weebụsaịtị ọ bụla ọzọ, healthcare-disclose.com na-eji 'kuki'. A na-eji kuki ndị a iji chekwaa ozi gụnyere mmasị ndị ọbịa, yana ibe ndị dị na webụsaịtị onye ọbịa nwetara ma ọ bụ gara. A na-eji ozi a iji kwalite ahụmịhe nke ndị ọrụ site na ịhazi ọdịnaya ibe weebụ anyị dabere na ụdị ihe nchọgharị ndị ọbịa na/ma ọ bụ ozi ndị ọzọ.
Maka ozi izugbe banyere kuki, biko gụọ akụkọ kuki dị na webụsaịtị Nzuzo Nzuzo.
Google Pịa kuki DART ugboro abụọ
Google bụ otu n'ime ndị ọzọ na-ere ahịa na saịtị anyị. Ọ na-ejikwa kuki, nke a maara dị ka kuki DART, iji nye ndị ọbịa saịtị anyị mgbasa ozi dabere na nleta ha na healthcare-disclose.com na saịtị ndị ọzọ na ịntanetị. Agbanyeghị, ndị ọbịa nwere ike ịhọrọ ịjụ ojiji kuki DART site na ịga na amụma nzuzo nke netwọkụ Google mgbasa ozi na ọdịnaya na URL ndị a - https://policies.google.com/technologies/ads
Ndị Mmekọ Mgbasa Ozi Anyị
Ụfọdụ ndị mgbasa ozi na saịtị anyị nwere ike iji kuki na mgbama webụ. Edepụtara ndị mmekọ mgbasa ozi anyị n'okpuru. Onye ọ bụla n'ime ndị mmekọ mgbasa ozi anyị nwere amụma nzuzo nke ha maka atumatu ha na data onye ọrụ. Maka ịnweta ọ dị mfe, anyị jikọtara na amụma nzuzo ha n'okpuru.
Atumatu nzuzo nke ndị mmekọ mgbasa ozi
Ị nwere ike ịlele ndepụta a ka ịchọta amụma nzuzo maka ndị mmekọ mgbasa ozi ọ bụla healthcare-disclose.com.
Rụba nke ahụ ama healthcare-disclose.com enweghị ohere ma ọ bụ ịchịkwa kuki ndị a nke ndị mgbasa ozi ndị ọzọ na-eji.
Atumatu nzuzo nke ndị ọzọ
healthcare-disclose.com Amụma nzuzo anaghị emetụta ndị mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ. Yabụ, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị lelee amụma nzuzo dị iche iche nke sava mgbasa ozi ndị ọzọ maka ozi zuru ezu karị. Ọ nwere ike ịgụnye omume na ntuziaka ha gbasara otu esi ahapụ nhọrọ ụfọdụ.
Ị nwere ike ịhọrọ gbanyụọ kuki site na nhọrọ ihe nchọgharị gị n'otu n'otu. Iji mara ozi zuru ezu gbasara njikwa kuki nwere ihe nchọgharị weebụ akọwapụtara, enwere ike ịhụ ya na webụsaịtị nke ihe nchọgharị ahụ.
Ikike nzuzo CCPA (Erela ozi nkeonwe m)
N'okpuru CCPA, n'etiti ikike ndị ọzọ, ndị ahịa California nwere ikike:
Rịọ ka azụmahịa na-anakọta data nke onye ahịa ka kpughee edemede na mpempe data nkeonwe nke azụmahịa chịkọtara gbasara ndị ahịa.
Rịọ ka azụmahịa ka ihichapụ data nkeonwe ọ bụla gbasara onye ahịa nke azụmahịa chịkọtara.
Rịọ ka azụmaahịa na-ere data nke onye ahịa, ọ bụghị ere nke data nke onye ahịa.
Ọ bụrụ na ị rịọ arịrịọ, anyị nwere otu ọnwa iji zaghachi gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji nke ọ bụla n'ime ikike ndị a, biko kpọtụrụ anyị.
Ikike nchekwa data GDPR
Anyị ga-achọ ijide n'aka na ị maara nke ọma ikike nchekwa data gị niile. Onye ọrụ ọ bụla nwere ikike ịnweta ihe ndị a:
Ikike ịnweta - Ị nwere ikike ịrịọ nnomi nke data nkeonwe gị. Anyị nwere ike ịnara gị obere ego maka ọrụ a.
Ikike imezigharị - Ị nwere ikike ịrịọ ka anyị mezie ozi ọ bụla ị kwenyere na ezighi ezi. Ị nwekwara ikike ịrịọ ka anyị dejupụta ozi ị kwenyere na ezughị ezu.
Ikike ihichapụ - Ị nwere ikike ịrịọ ka anyị ihichapụ data nkeonwe gị, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Ikike igbochi nhazi - Ị nwere ikike ịrịọ ka anyị gbochie nhazi data nkeonwe gị, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Ikike ịjụ nhazi - Ị nwere ikike ịjụ nhazi nke data nkeonwe gị, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Ikike nke mbugharị data - Ị nwere ikike ịrịọ ka anyị nyefee data anyị chịkọtara na nzukọ ọzọ, ma ọ bụ ozugbo nye gị, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Akụkụ ọzọ nke mkpa anyị bụ ịgbakwunye nchebe maka ụmụaka mgbe ị na-eji ịntanetị. Anyị na-agba ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha hụ, sonye na/ma ọ bụ nyochaa ma duzie mmemme ha n'ịntanetị.
healthcare-disclose.com adịghị ụma na-anakọta ozi njirimara nkeonwe ọ bụla n'aka ụmụaka ndị na-erubeghị afọ 13. Ọ bụrụ na ị chere na nwa gị nyere ụdị ozi a na weebụsaịtị anyị, anyị na-agba gị ume ka ị kpọtụrụ anyị ozugbo, anyị ga-eme ike anyị niile iji wepụ ngwa ngwa dị otú ahụ. ozi sitere na ndekọ anyị.
Nje Virus a mara amara nwere ike ịbụ ihe iyi egwu zuru ụwa ọnụ maka ụmụaka, CDC dọrọ aka ná ntị
Ọrịa COVID-19 akwụsịbeghị, mana ndị ọkachamara na-echegbu onwe ha maka nje dị adị nke nwere ike bụrụ nnukwu ihe iyi egwu ụmụaka niile n'ụwa
Ngwa 10 ị ga-eji eme njem ga-enwerịrị maka ụbọchị njem mba: akpụkpọ ụkwụ, akpa azụ na ihe ndị ọzọ
Na-aga maka mkpagharị mana ị maghị ihe ị ga-akwakọba maka njem gị? Nke a bụ ihe ị ga-eweta
Uru ahụike Beer: Ihe 8 kpatara Booze ji dị mma maka eriri afọ
Nye ọtụtụ n'ime anyị, ọ dịghị ihe na-enye afọ ojuju karịa imepe biya oyi na njedebe nke ogologo ụbọchị. Mana omume a ọ dị mma maka eriri afọ anyị? Nnyocha na-ekwu ee. Nke a bụ ụfọdụ uru biya maka eriri afọ gị